Vaovao - Ahoana ny fisafidianana ny milina fanapahana sticker
Miaraka amin'ny fampivelarana ny indostrian'ny dokam-barotra, maro ny filana fanontana namboarina manokana no nipoitra teny an-tsena, ary nipoitra ihany koa ny serivisy fanamboarana vondrona kely an-tserasera sy an-tserasera. Indrindra ho an'ny marika sy ny taratasy fametaka, ny bika kely amin'ny fanaingoana namboarina manokana dia tokony ho raisina raha mandinika ny isan'ny vokatra hamidy na manova ny filàna fampiroboroboana amin'ny vanim-potoana.
Na dia manana tombony bebe kokoa amin'ny hafainganana aza ny milina fanapahana lozisialy nentim-paharazana, dia nila nanao ny bobongolo araka ny sticker hatrany, izay tsy fandaniam-potoana fotsiny, fa mampiakatra fandaniana be koa. Mandritra izany fotoana izany, ny milina fanapahana marika lehibe dia naka toerana malalaka foana ary manana vidim-bola lafo, izay tsy mety amin'ny famokarana vokatra namboarina.
Ameida C andian-tsarimihetsika nomerika nomerika nampiasa lohan'ny cutter 3 hanapaka ho azy, afaka mahita ny sisiny mifanaraka amin'ny rakitra endrika, ary afaka manapaka ny karazan-tsary mahazatra na lamina miendrika manokana amin'ny antsy. Izy io koa dia nanana fiasa fanitsiana mandeha ho azy mba hiantohana ny maha-marina ny fanapahana mitohy mandritra ny fotoana maharitra, ary afaka manao fandidiana mandeha ho azy tsy misy fikarakarana.
Ity milina fanapahana marika ity dia afaka mameno ny fivoahan'ny fako marginal sy ny fiasan'ny laminating raha manapaka ny marika, mitahiry ny asa ary ny vidiny indrindra. Mandritra izany fotoana izany, ny milina fanoratana nomerika Ameida C dia nisy volavola kely kokoa sy dian-tongotra kely kokoa, izay nety indrindra ho an'ireo orinasam-pirinty kely sy mpanamboatra lehibe izay mamokatra tsy miankina ny fitaovana fanontana hanaovana kaody bara na marika.